Shirkada Nissan oo $220 milyan oo khasaare ah ay ka soo gaari doonto dalka Japan – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaShirkada Nissan oo $220 milyan oo khasaare ah ay ka soo gaari doonto dalka Japan
Hiiraan Xog, Oct 03, 2017:- Shirkadda baabuurta samaysa ee Nissan ayaa dib u soo celinaysa 1.2 milyan oo gaari oo ay Japan gudahiisa ku iibisay, ka dib markii ay masuuliyiin sheegeen in tijaabooyinka ammaanka ee la sameeyay aysan waafaqsanayn sidii laga rabay dalkaas.
Saamiyada shirkadda Nissan ayaa hoos u dhacay 5% Isniintan, ka dib marii ay sheegtay in baabuurta ay soo celinayso si ay u cilad bixiso in ay kaga bixi doonto 25 bilyan oo yen oo u dhiganta $220 milyan oo gini.
Gawaaridan ayaa la soo saaray saddexdii sano ee la soo dhaafay si Japan gudahiisa loogu gado, haddana dib u eegis ayaa lagu samayn doonaa.
Shirkadda ayaa bilawday baaritaan ku saabsan sababta ammaanka gawaaridu aysan u gaarsiisnayn heerkii ay dawladdu dajisay.
Madaxa shirkadda Nissan, Hiroto Saikawa ayaa raali galiyay macaamiisha, wuxuuna sheegay in ay shirkaddu ka shalaytootay wixii aan habboonayn ee shirkaddu ku kacday.
Noocyada gawaarida ee dhibaatadani saamaysay waxaa ka mid ah gawaarida qoyska ee Serena minivan iyo Note compact.
Nissan waa shirkadda labaad ee ugu wayn dalka Japan ee gawaari soo saarta, waana middii labaad ee lagu helo in ay khalad wayn ka gaysatay gudaha dalkaas, ka dib markii shirkadda Mitsubishi Motors ay qiratay bishii Abriil ee 2016 in ay ka beensheegtay tijaabo lagu sameeyay noocyo ka mid ah gawaarida ay samayso.